Set ịghasa: ihe ọ bụ na ngwa | Akụrụngwa n'efu
Set ịghasa: ihe ọ bụ na ngwa
Enwere ọtụtụ ụdị ịghasa na ahịa, ụfọdụ nnọọ ewu ewu na ndị ọzọ dịtụ ọzọ osisi pụrụ iche maka ụfọdụ ụfọdụ ngwa. Otu n'ime ụdị ndị ahụ bụ ihe akpọrọ akpọrọ, nke anyị ga-arara isiokwu a iji kọwaa ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị a na otu ọ ga - esi nyere gị aka Mee N'onwe Gị oru ngo.
El set ịghasa Ọ bụ ezigbo ụdị ịghasa nke a na-eji ụfọdụ ngwa bara uru nke ị hụworo n'oge ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, ihe mbụ na-abata m n'uche ugbu a bụ mgbama ma ọ bụ ọkụ n'okporo ámá, ebe a na-ejikarị ya ejide akụkụ ụfọdụ nke ọkụ ndị a mgbe a na-ekpochapụ ha ...
Ihe dị iche n'etiti bolt na ịghasa abụghị ihe dị mfe nye ọtụtụ. Ihe dị iche n'etiti ha abụọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya, mana ọdịiche kachasị dị na eri na nha. Mkpọchi na-adịkarị ibu ma na-enweghị akara aka. Ihe nkedo ahụ dị ntakịrị ma kwuo.
1 Gịnị bụ set ịghasa?
2 Ofdị kposara
2.1 Dị ka isi
2.2 Dị ka ịghasa ihe
2.3 Dika emechara
2.4 Dị ka ọrụ ahụ si dị
Gịnị bụ set ịghasa?
Un set ịghasa Ọ bụ ihu ọma bụ silinda ọla ma ọ bụ mkpịsị mkpịsị nwere eriri nke etinyere n'ogologo ya niile. Nke ahụ bụ, enweghi isi dịka ọ nwere na kposara ndị ọzọ. Nanị ihe dị iche na nsọtụ ya bụ na a na-akpọ otu n'ime ha mgbọrọgwụ ma a ga-atụba ya n'ime oghere eri na njedebe ọzọ na-enwekarị ahịhịa etinyere iji dabaa na screwdriver (ọ nwekwara ike ịbụ igodo Allen) iji gbanye ma ọ bụ wepụ .
Uru nke ụdị ịghasa na-abụkarị ndozi ihe na nhazi nke ụfọdụ ihe edozi na ihe mbughari. Iji maa atụ, were otu akụkụ nke ọkpọkọ nke na-abanye n'ime ọkpọkọ ọzọ. Mpụga dị n’èzí ejirila oghere nwee oghere nke a ga - etinye ya ka ọ nwee ike ịrụ ọrụ n’ime eriri ahụ dị n’ime, wee si otú ahụ na - ejide tube nke dị n’ime.
Esemokwu dị iche n'etiti set ịghasa na nke omenaala bi na physiognomy ya na ikike nke edobere ya. Na nke ọdịnala, ị hụla n'ezie na ị na-agbanye nwayọọ nwayọọ, mana isi ya (ọkachasị ma ọ bụrụ ọla, aluminom ma ọ bụ alloy ọzọ dị nro, na ọkachasị mgbe ejiri ihe ụfọdụ na-enweghị njikwa) nwere ike njọ n'ihi ike a na-eme . Na-eme ka ọ ghara ikwe omume iwepụ ya ma ọ bụ na-agbanye ya ...
Na setịpụrụ setịpụrụ, akụkụ nke ọnụ ụzọ na-arụ ọrụ abanyela n'ime nkedo n'onwe ya, na-enweghị isi. Ya mere, ọ bụ naanị naanị doro traction. Na mgbakwunye, ha na-ejikarị ígwè mee ihe maka iguzogide dị ukwuu.
E nwere ọtụtụ ụdị kposara karịrị ihe nkedo a, ma enwere ike nkewa dịka ihe dị iche iche si dị.
Dị ka isi
Dị ka udi nke isi nke ịghasa e nwere:
Hexagonal: Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ma na-ejikarị ya maka ịkwado ma ọ bụ gbagoo akụkụ nrụgide. Ha na-enwekarị aku. Ma ọ bụghị ha niile nwere ike iji sie ike jiri oghere ma ọ bụ spana, ụfọdụ na-agụnye scridriver Dịka ọmụmaatụ, ihe hex flange na-enwekarị kpakpando isi, uru kasịnụ ya bụ na ọ dịghị achọ nza.
Slotted isi: ha bụ ndị a na-ahụkarị, ndị na-ekwe ka iji screwdriver mee ihe. Enwere ha nwere uzo di nma, okpukpu obe, wdg. Ha dị mma maka mgbe anaghị achọ nnukwu mgbatị, dịka ya na ihe ndị e ji osisi rụọ. N'ọnọdụ ọ bụla, isi na-anọ n'èzí, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na a na-eme ka ọ tụgharịa, enwere ike zoo ya.
Isi Square: ha anaghị adị ka ndị gara aga. A na-eji ha n'ọnọdụ ebe a chọrọ nnukwu mgbatị dị ka ndị nwere hexagonal. Dịka ọmụmaatụ, maka idozi ngwá ọrụ ịcha ma ọ bụ ịmegharị akụkụ nke ụfọdụ igwe.
Cylindrical ma ọ bụ gburugburu isi: ha na-enwekarị hexagon n'ime iji tinye bọtịnụ Allen ma ọ bụ ụdị ọzọ. A na-eji ha eme ihe na nkwonkwo chọrọ mkpa dị elu na mmachi. Anam eji ohere a kowe udiri isi:
Ewepụghị- Ha nwere naanị otu oghere n’isi ha maka ụdị screwdriver a ewepụghị.
Star ma ọ bụ obe: ha bụ ndị a na-akpọ ụdị Phillips.
Pozidriv (Pz): dị nnọọ ka nke gara aga, mana nwere obe miri emi na akara elu ọzọ na-enye mpụta nke akara mmuke.
torx- Ndị a abụghị ndị nkịtị, mana enwere ike iji ya na ụfọdụ ngwa ọrụ osisi, wdg. Isi ya nwere oge ezumike nke kpakpando dị ụkọ.
ndị ọzọ: enwere ndi ozo dika iko ma obu iko, Robertson, Tri-Wing, Torq-Setm, Spanner, wdg.
Butterfly: Dị ka aha ya na-egosi na o nwere ụdị aku na "nku" n'ụdị urukurubụba na-enwe ike ikesiike na aka gị. Maka ikpe ebe enweghi ike ichota ya na odi nkpa ka ewepu ya ma wepu ya ugboro ugboro.
Dị ka ịghasa ihe
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịghasa ihe Anyị nwere:
Nke aluminom: abụghị ihe na-eguzogide ọgwụ na mgbalị, ma na-eguzogide ọnọdụ ihu igwe na ọkụ. Ezigbo maka plastik na nkụ.
Duralumin: ha bụ nke aluminom jikọtara ya na ọla ndị ọzọ dị ka chromium. Ha na-eme ka ọ dịkwuo ogologo.
Nchara: ọ na-abụkarị igwe anaghị agba nchara, ha dịkwa oke siri ike.
Plastic- Ndị a dị obere, mana enwere ike ịnagide ọnọdụ iru mmiri dị oke oke, dịka ngwa ngwa pọmpụ.
Brass: Ha nwere agba ọla edo ma dịkarịsịrị iji osisi. Ha siri ike, mana ha esighi ike ka nke nchara.
Ihe ndị a nwere ike ịnwe dị iche iche gwuchara:
Cadmium: ha nwere ọdịdị ọlaọcha, nwee ezigbo nguzogide ọnọdụ dị iche iche na mgbe ọ na-ekpo ọkụ ọ naghị emepụta ngwaahịa sitere na corrosion.
Kpaliri: a na-eji bat zinc eme ihe ma ọ nwekwara ọdịdị ọlaọcha, ọ bụ ezie na a ga-ahụ ntụpọ zinc ahụ. Ọ na-eguzogide nke ọma na ọnọdụ nrụrụ.
Na-emegharị: ha nwere odo odo na-acha odo odo. Ọ na-enweta ya na a kpaliri na chrome imecha. Nke a na-eme ka nkwụsị corrosion dịkwuo elu.
Nickel kpara: Nwere ihe na-egbuke egbuke nke ọla edo maka ekele nickel. Ọ na-ejikarị eji achọ mma.
Ọla kọpa- Brass eji na nwere a onwunwu dara ọdịdị maka ụfọdụ ji achọ risịrị na corrosion eguzogide.
Ekwuru na ozi: ha na-asa mmiri phosphoric site na nmikpu na nke na-enye ha ọdịdị dị oji.
Bluing: ha na-egbuke egbuke na agba ojii. Ha na-enweta oxidation a na-achịkwa nke nchara nke na-emepụta akwa ojii nke na-eme ka ha nwee ike iguzogide nrụrụ.
AgbaA na-ese ụfọdụ ka ha bụrụ ihe ịchọ mma karị, dịka ọmụmaatụ kposara ojii nke ụfọdụ arịa ụlọ osisi ji.
Dị ka ọrụ ahụ si dị
Dị ka ọrụ ahụ nke kposara nwekwara ike ịbụ katalọgụ na:
Ntuchi onwe onye na igwupu onwe- Ejiri maka mpempe akwụkwọ na osisi siri ike. Ha dị nkọ ma nwee ike igbubi ụzọ nke ha site na ihe ahụ.
Eriri osisi: N'adịghị ka ndị gara aga, ha enweghị eriri a pịrị apị n'ogologo ha niile, kama ọ nwere akụkụ nke nkedo ahụ na-arụ ọrụ. Ha bụ ụdị lag lag maka osisi ebe eri bụ naanị 3/4 nke ịghasa. Ha nwekwara isi nkọ ma nwee ike ibelata ụzọ nke aka ha.
Na aku: Ha enweghị isi, ma jiri aku sonye n'akụkụ na oke nrụgide. A pụkwara iji ya na ihe ndọtị na-arị elu, si otú a na-eme ka ebe obibi nke mkpụrụ na isi dịkwuo ike.
Set ịghasa ma ọ bụ studs: (nke a kọwara n'elu)
Dị Oké Ọnụ Ahịa: Ọ bụ ụdị ịghasa maka nche ngwa na e screwed na-agaghị ekwe omume iwepu. I nwere ike ịmanye akụkụ ahụ ka ọ gbajie. A na-eji ha maka akụkụ nke ekpughere ọha na eze, na-egbochi ha iji ya eme ihe.
ndị ọzọ: ha nwekwara ike ịhazi ya maka ngwa ziri ezi dị elu, nguzogide dị elu (akara akara na TR na isi), wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Set ịghasa: ihe ọ bụ na ngwa
DXF: ihe ị kwesịrị ịma gbasara ụdị faịlụ a
Linear actuator maka Arduino: mechatronics maka ọrụ gị